ချွတ်ခြုံ – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
ကားမောင်းနေတုန်း ဖုန်းဝင်လာသည်။ ဖုန်းသံက အိမ်မှ ဆက်သည်ဟု တန်းသိနိုင်သော သီချင်းသံ။ ကားမောင်းနေတုန်းမို့ ဖုန်းကို ကျွန်တော် မထူးတော့ဘဲ ဘေးတွင် ထိုင်နေသော ဇနီးသည်လက်ထဲ ဖုန်းထည့်ပေးလိုက်သည်။
စကားအသွားအလာအရ ချက်ချင်း သိလိုက်ရပြန်သည်။ ကျွန်တော့်သမီး ကိုင်သော ပါလေရာဖုန်း ပျောက်သွားပြီ ဆိုခြင်းပင်။ ရုတ်တရက်တော့ စိတ်တိုသွားရပါသည်။ သို့သော် တစ်ဖက်ကလည်း ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်မိရပြန်သည်။
ကျွန်တော့်သားက ၁၈၊ သမီးက ၂၀။ သည်အရွယ်တွေက ပြောရဆိုရ အင်မတန်ကျပ်သည်။ တစ်ခုခုပြောလိုက်လျှင် “ဒါတော့ သားသိပါတယ်” “သည်လောက်တော့ သမီးနားလည်ပါတယ်”ဟု ပြန်ပြောတတ်ကြသော အရွယ်တွေ။ သည်ဖုန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးလည်း သတိပေးဖို့ အတန်တန် ကြိုးစားဖူးသည်။ သားကတော့ ကျွန်တော့်စကားကို နားထောင်ပြီး ဖုန်းယူသွားလျှင် ဖုန်းထည့်သော အိတ်ကလေးနှင့် လည်ပင်းမှာ ဆွဲသွားသည်။
ကျွန်တော့်သားက အင်မတန် အာရုံများသည့်ကောင်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း သူ့စိတ်ကူးလေးထဲမှာ အလွန်အမင်းနစ်နေတတ်သည့်ကောင်။ ဘယ်လောက်များ ဆိုးလဲဆိုလျှင် သူ့ကိုယ်သူ ညစာစားပြီး မပြီးပင် ရံဖန်ရံခါ မမှတ်မိတတ်ချေ။ အကြင်သူသည် ဘာဟင်းနဲ့စားသလဲလို့ သူထမင်းစားအပြီး နာရီဝက်ခန့် အကြာတွင် မေးငြားအံ့။ သူ ပြန်စဉ်းစားမရတော့သည်မှာ မလွဲဧကန်။ သူ့ကိုယ်သူ ဘာဟင်းနဲ့ စားလို့စားမှန်းတောင် သတိရှိတဲ့ကောင်စားမျိုး မဟုတ်။
သည်တော့ ပါလေရာဖုန်းကို သူနှင့် တစ်စက်မှ စိတ်မချ။ ဘယ်နား ချထားခဲ့မှန်း မသိဖြစ်မည့်သူဟု ကျွန်တော် အပြည့်အဝ ယုံသည်။ ထို့ကြောင့် သူ့ကို ကျွန်တော် သေချာရှင်းပြကာ လည်ပင်းမှာ လွယ်စေခဲ့သည်။ သူကလည်း စကားနားထောင်ကာ သူ ထိုဖုန်းကိုင်တိုင်း လည်ပင်းမှာ ဆွဲထားတတ်ပါသည်။ (ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါ့သား။)
သမီးကတော့ အလွန်ဂိုက်ပေးကြမ်းသော၊ ပြောရဆိုရလည်း အင်မတန် ခက်သော၊ ငါသိငါတတ် အင်မတန်လုပ်ချင်သော ကျွန်တော့်ဉာဉ်ဆိုး မှန်သမျှကို ပြည့်ပြည့်ဝ၀ ကျကျသန်သန် ဆက်ခံထားသူ ဖြစ်ထသည်။ သူ့ကိုကျတော့ ပြောလို့ တစ်စက်မှ မရခဲ့။
အခုတော့ ဖြစ်ပြီ။ ပါးစပ်နှင့် ပြောလို့မရတာကို အတွေ့အကြုံက သင်သွားလေပြီ။ ထိုအတွက် ဂျွမ်းထိုးချင်အောင် ဝမ်းသာနေမိရပါတော့သည်။
ပါလေရာ ဖုန်းပျောက်တာ ဘာမှ မဆန်း။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ပျောက်ဖူးပါသည်။ ကျွန်တော်ပျောက်တာက ခါးမှ ထွက်ကျသွားခြင်းဖြစ်သည်။
မှတ်မှတ်ရရ၊ ပထမအကြိမ် စာနယ်ဇင်းအဆိုပြိုင်ပွဲ ကျင်းပစဉ်ကဖြစ်သည်။ အဲတုန်းက ပါလေရာဖုန်းတွေ သည်လောက် မပေါသေး။ ဂျီအက်(စ်)အယ်(မ်)ဖုန်းမှ တကယ့်ပေါ်ဦးပေါ်ဖျားကာလ။ ဖုန်းကံကောင်းသည့် ကျွန်တော်က ပထမဆုံးအသုတ် ဂျီအက်(စ်)အယ်(မ်)တစ်လုံးကို ကျပ်ငွေငါးသိန်းနှင့် ရလိုက်သည်။ အဲတုန်းက ဆင်း(မ်)ခါ့(ထ်)ဟု ခေါ်သော ဖုန်းကတ်တင်ရတာ မဟုတ်။ ဟဲ(န်)ဆက်(ထ်)ဟုခေါ်သော ဖုန်းအလုံးလိုက်တောင် ရလိုက်သေး။ ဆီးမဲ(န်)(စ်) အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
စာနယ်ဇင်းအဆိုပြိုင်ပွဲကျင်းပရာ နေရာက ယုဇနဂါးဒင်း(န်)ဟိုထဲ(လ်)မှာ။ ထိုအချိန်က ယုဇနခြံဝင်းအတွင်းမှာ ဈေးရောင်းပွဲလည်း ရှိနေသည် ဖြစ်ရာ လူအုပ်က ကြက်ပျံမကျ။ လူကြားထဲမှာ တိုးရင်း ဝှေ့ရင်းဖြင့် ခါးတွင်ချိတ်ထားသော တယ်လီဖုန်းက အလုံးလိုက် ပြုတ်ကျ ကျန်ရစ်သည်။ ခါးမှာ အိတ်ပဲ ကျန်သည်။
ကျွန်တော် မသိသေးပါ။ အဆိုပြိုင်ပွဲသို့ ရောက်နေသူ နောက်တစ်ဦးထံ ကျွန်တော့်အိမ်က ဖုန်းဆက်သည်။ ဖုန်းကောက်ရထားကြောင်း အိမ်ကို ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားထားသဖြင့် ပွဲခင်းမှ တာဝန်ရှိသူများထံတွင် သွားရွေးဖို့ လှမ်းပြောခြင်းဖြစ်သည်။ အဲတော့မှ ခါးမှာ ဖုန်းအိတ်ပဲရှိပြီး ဖုန်းမရှိတော့မှန်း ကျွန်တော် သိသည်။
မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ကျွန်တော့်ဖုန်း ပြန်ရခဲ့ပါသည်။
အဲဒီ့နောက် သိပ်မကြာခင်မှာ မိတ်ဆွေအစ်မကြီးတစ်ဦးက လောပျာပျာဖြင့် ဖုန်းဆက်သည်။ သူ့ခင်ပွန်း မူးမူးနှင့် ဖုန်းပျောက်သည့်အကြောင်း။ သူ့ခင်ပွန်းက မူးလို့ကောင်းနေဆဲမို့ မောင်ရင်းသဖွယ် ခင်မင်နေသူ ကျွန်တော့်ကို လှမ်း အကူအညီတောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
ဖုန်းကိုတော့ ပြန်တွေ့ပြီ။ တစ်ဖက်က ငွေတောင်းနေသည်တဲ့။ အဲဒါကို ကျွန်တော်က လိုက်ရှင်းပေးဖို့ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်လိုက်သွားရပါတော့သည်။ ကျွန်တော့်အိမ်နှင့် မဝေးလှသော ရပ်ကွက်လေးတစ်ခုကို ဖြစ်သည်။ တစ်မိသားစုလုံးက ကျီးများ အာသလို ဝိုင်းအာနေကြသည်။ ပြန်ပေးသည့်အတွက် သူတို့ကို ငွေတစ်သိန်းလောက် ဆုချစေချင်သော စကားတွေပြောကြသည်။ အစ်မကြီးနှင့် ကျွန်တော် ညှိပြီးသား။ အစ်မကြီးကလည်း ကျွန်တော့်ကို ပိုက်ဆံပေးပြီးသား။ ငါးသောင်းတာ့ ပေးမည်ဟု အစ်မကြီးက ယတိဖြတ်ပြီးသား။
ပြောရင်းနှင့် ကျွန်တော် စိတ်ချဉ်ပေါက်လာသည်။ မူကို ဦးထိပ်ထားတတ်သော ကျွန်တော့်စိတ်နှင့် ဟိုမိသားစု၏ ပြောပေါက်တွေက ဖီလာ ကန့်လန့်။ ကိုယ့်ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်၊ ကိုယ်လည်း ဘာမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိသော အရာတစ်ခုဖြစ်သလို ကောက်ရသောပစ္စည်းဆိုတာ ပိုင်ရှင်ပေါ်လာလျှင် ပြန်ပေးရမည်မှန်း သိသိကြီးနှင့် မာန်တက်နေတာကို ခံတွင်းမတွေ့တော့။
နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်ကပင် စကားရောဖောရော လုပ်ကာ ငါးရာတန် ငွေစက္ကူတစ်ထပ်ကို လုံးထွေးပြီး ပေးလိုက်ကာ တယ်လီဖုန်းကို ပြန်ယူလာခဲ့သည်။
ကားပေါ်ရောက်တော့ အစ်မကြီးလက်ထဲကို ငွေသုံးသောင်း ပြန်အပ်လိုက်သောအခါ အစ်မကြီးက အံ့တွေ ဩနေပါသည်။
“ငွေညှစ်သလို လုပ်နေတာကို မုန်းလာလို့ တမင်လျှော့ပေးပစ်ခဲ့တာ”ဟု ကျွန်တော် ပြောလိုက်ရပါသည်။
အခု သမီးဖုန်းပျောက်တော့ သမီးလည်း ဒေါင်းတောက်နေသည်။ အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့သော သားတော်မောင်လည်း ဒေါင်းတောက်နေသည်။ သူရို့အမေကလည်း မျက်နှာအိုအိုဖြင့် ဟိုသည်လျှောက်ဆက်နေလေသည်။ ကျွန်တော်က ပွဲကြည့်ပရိသတ်။ ပွဲကြည့်ပရိသတ်မှ ရိုးရိုးမဟုတ်၊ ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း အူမြူးနေသော ပွဲကြည့်ပရိသတ်ဖြစ်သည်။
ပျောက်သွားသော ဖုန်းကို ဆက်ကြသည်။ ဟိုက ဖုန်းမကိုင်။ မကိုင်သည့်အပြင် ပိတ်တောင် ထားလိုက်ပြန်သေးသည်။
အတန်ကြာတော့ အိမ်ဖုန်းကို ထိုနံပါတ်ဖြင့် လှမ်းဆက်သည်။ ဘာမှတော့ အသံမပေး။ သားတော်မောင်က တောင်းပန် မေတ္တာရပ်ခံသမျှကို နားထောင်သွားသည့်တိုင် ဘာသံမှ ပြန်မပေး။
ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းပျောက်သည့်သတင်းက ကျွန်တော့်သမီးသူငယ်ချင်းတွေ၊ သမီးသူငယ်ချင်း၏ အမေတွေ၊ ကျွန်တော့်ဇနီးသူငယ်ချင်းတွေ အကုန်လုံးကြားမှာ တောမီးသဖွယ် ပျံ့သွားသည်။ အားလုံးက ထိုဖုန်းကို ဝိုင်းဆက်ကြသော်လည်း အဆက်အသွယ် မရ။ ဟိုက ဖုန်းကို ပိတ်လိုက်လေပြီ။
ထိုနေ့က ၂၀ဝ၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၃ ရက် စနေနေ့ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်နေ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့က တနင်္ဂနွေ။ သက်ဆိုင်ရာကို အကြောင်းကြားပြီး ဖုန်းပိတ်ခိုင်းဖို့က တနင်္လာနေ့အထိ စောင့်ရမည်။ ထိုကြားထဲမှာ ဖုန်းကို ကောက်ရထားသူက ထိုနံပါတ်မှတစ်ဆင့် နှစ်သက်ရာကို ဖုန်းဆက်ထားနိုင်သည်။ ဖုန်းခတွေ တစ်ပုံတစ်မ ကျနိုင်သည်။ ထိုဖုန်းခတွေကို ကျွန်တော်သာ ခံပေရော့။
သို့သော် ထိုဖုန်းကို နိုင်ငံခြားသို့ ခေါ်မရအောင် ကျွန်တော် လုပ်ထားပြီးသားမို့ သိပ်တော့ မပူမိချေ။ နှစ်ရက်အတွင်း သေအောင်ဆက်တောင်မှ ငါးသောင်းပင် ကျမည်မဟုတ်မှန်း တွက်မိသောကြောင့်ပင်။
သက်ဆိုင်ရာကို အကြောင်းကြားပြီး ဖုန်းကို ပိတ်လိုက်၊ ဖုန်းကတ် အသစ်ပြန်လုပ်၊ ဖုန်းအသစ်တစ်လုံး ပြန်ဝယ်၊ ဘာညာဆိုလျှင် စုစုပေါင်း သုံးသိန်းလောက်တော့ အခြောက်တိုက် ထီပေါက်ပေရော့မည်။ သို့သော် လက်ရှိ ကျွန်တော့် ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေနှင့် ထိုမျှ ငွေသည် တနင့်တပိုးဖြစ်နေသည့်တိုင် သိပ်တော့ ဝန်မကြီးလှပါ။ သမီးတော် ရသွားသည့် သင်ခန်းစာအတွက် ဈေးကြီးလှသော သင်တန်းကြေးသာဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
သို့သော် ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာ ဖြစ်ရပါသည်။
ကျွန်တော့်အတွက်လည်း စိတ်မကောင်းတာမဟုတ်၊ သမီးအတွက်လည်း စိတ်မကောင်းတာမဟုတ်ချေ။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရခြင်းဟုဆိုလျှင် ကြီးကျယ်လှရန်ကောဟု အဆွေစာဖတ်သူ တွေးကောင်း တွေးပါလိမ့်မည်။
ဟုတ်ကဲ့… ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားကာ တစ်ပြည်လုံးကို မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားလေ့ရှိသော ကျွန်တော့်မှာ တကယ့်ကို ရင်နာ ညှိုးခြုံး စိတ်နှလုံးမချိ ဖြစ်မိရသည်ကား အမှန်ပင်။
“ကိုယ်နှင့်မဆိုင် ခွင့်မပိုင် ဆွဲကိုင်မကြည့်ရ”ဟူသော အခြေခံနီတိလေးကိုသော်မျှ လိုက်နာ မနေနိုင်အား၊ “ကိုယ့်ချွေးနှဲစာနှင့် ရှာဖွေရ ရှိထားတာ မဟုတ်သော သူတစ်ပါးပစ္စည်းကို အလကား မလိုချင်ဘူး”ဆိုသည့် အခြေခံ လူ့မာနလေးပင် ထားရကောင်းမှန်း မသိလေသည့် စာရိတ္တ ချွတ်ခြုံကျမှုများ တစ်နေ့တခြား တိုးပွားနေသော အခြေအနေကို သည်ဖုန်းကိစ္စတွေက အတိအလင်း ညွှန်ပြလျက်ရှိပါသည်။
ကျွန်တော်တို့က ဆက်လျှင်လည်း မကိုင်တော့ဘဲ ဖုန်းပိတ်ထားတာ၊ သူက တစ်ခါ ဆက်လာသော်လည်း ဘာသံမှ မထွက်တာများကို ကြည့်ပြီး ဆက်စပ် ဆင်ခြင်ကြည့်ရသော် ထိုကောက်ရထားသူသည် ထိုဖုန်းကို ပြန်ပေးလိုစိတ် လုံးဝ မရှိတော့တာ သေချာနေပါပြီ။
ဘာ့ကြောင့် ပြန်ပေးလိုစိတ် မရှိတော့တာပါနည်း။
ဟုတ်ကဲ့… သူသည် ထိုဖုန်းကို ရောင်းစားပါတော့မည်။ ဖုန်းက ဆိုနီ အရစ်(ခ်)ဆင်(န်) စမာ့(ထ်)ဖုန်းဖြစ်သည်။ အသစ်မှ နှစ်သိန်း ပတ်ဝန်းကျင် ပေးလျှင် ရနိုင်သော ဖုန်းမျိုးဖြစ်သည်။ အဟောင်းကို သွားပြန် ရောင်းလျှင် အလွန်ဆုံးမှ တစ်သိန်းလောက်ပဲ ရခြိမ့်မည်။ ခိုးရာပါပစ္စည်းမှန်း ဝယ်သူက ရိပ်မိလျှင် ထိုမျှပင် ရတော့မည်မဟုတ်။ လေး-ငါး-ခြောက်သောင်းက အလွန်ဆုံး ဖြစ်သည်။ (ဖုန်းဆက်ဖို့ဆိုလျှင်တော့ ထိုသူ ထိုမျှ မိုက်မဲမှာ မဟုတ်တာ သေချာပါသည်။ တနင်္လာနေ့ ရောက်သည်နှင့် ထိုဖုန်းမှာ ဆက်၍ရတော့မည် မဟုတ်ပေ။)
ဒါဆိုလျှင် သူ ပြန်မပေးဘဲ ထားလိုက်သည်မှာ ငွေလေး လေး-ငါး-ခြောက်သောင်းကို မက်သောကြောင့်သာဖြစ်လောက်သည်မှာ အလွန် သေချာသွားလေပြီ။
မက်တာပေါ့။ ပိုက်ဆံတော့ ကျွန်တော်လည်း မက်တာပေါ့။
အခုခေတ်မှာ ပိုက်ဆံက ပိုမက်စရာကောင်းလာသည်။ လိုချင်စရာတွေက အများသား မဟုတ်ပါလား။ စားဝတ်နေရေး ဖူလုံရုံမျှဖြင့် မတင်းတိမ်နိုင်လောက်အောင် လိုချင်စရာတွေက ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အောတိုက်နေသည်။ ကားရှိသူကလည်း လက်ရှိထက် နံပါတ်ပိုမြင့်သောကား၊ မော်ဒယ်(လ်)ပိုမြင့်သော ကားကို မက်သည်။ အိမ်ရှိသူတွေကလည်း လက်ရှိထက် ပိုမိုသစ်လွင်ကျယ်လွင့်သော အိမ်ကို အလိုရှိသည်။ ရုပ်သံစက်ရှိသူတွေအတွက်လည်း မက်ချင်စရာ၊ ဘယ်နှရာခိုင်နှုန်းတောင် လျှော့ပေးဦးမည်ဆိုသည့် ကြော်ငြာတွေကြားမှာ အံတကြိတ်ကြိတ်။ ဖုန်းရှိသူတွေဆိုလည်း ကိုယ့်လက်ထဲက ဖုန်းထက် သူများကိုင်သော ဖုန်းကမှ ပိုမက်စရာကောင်းနေပြန်သည်။
ယုတ်စွအဆုံး၊ စားစရာသောက်စရာမှာပင် စားချင့်စဖွယ် ဆင်ယင် ထုတ်ပိုးထားသော စားစရာတွေက သည်ခေတ်မှာ ပိုများလာသည်။
သည်တော့ လူတွေ ငွေမက်တာ မဆန်းပါ။ ကြွယ်ဝချင်တာ မဆန်းပါ။
ဆန်းတာက ငွေကြေးကို မက်မောရကောင်းမှန်းသိလာသလို ကြွယ်ဝလိုစိတ် အပြည့်နှင့် ထိုလူတွေကား အသိဉာဏ်နှင့် စာရိတ္တအရာမှာ ချွတ်ခြုံကျသည်ထက် ကျကျလာတာပင်ဖြစ်သည်။
ဘယ်သူသေသေ ငတေမာပြီးရောဆိုသော “ငတေစိတ်”တွေ ဖွံ့ထွားလွန်းမက ဖွံ့ထွားနေသော ခေတ်ကြီးတစ်ခေတ် ဖြစ်လို့လာနေတာကို ကျွန်တော်တို့ မြင်နေရသည်။ ဒါ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာချည်း မဟုတ်။ မကြာမတင်ကမှ ဖွံ့ဖြိုးစပြုလာသော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာလည်း ထို “ငတေစိတ်”တွေက ထွန်းကားတန်သလောက် ထွန်းကားလို့ နေပါသည်။
ရုပ်ဝတ္ထုများ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းနှင့် အချိုးညီစွာ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းမှာ ယိုယွင်းပျက်စီးလာသည်မှာ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် ပိုမိုသိသာလို့ နေသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း အသိဉာဏ်ရင့်သန်သူ အနောက်တိုင်းသားများက ဗုဒ္ဓ တရားတော်များမှတစ်ဆင့် ငြိမ်းအေးမှုကို ဖွေရှာလာတတ်ကြသလို တချို့တွေကလည်း မဖွံ့ဖြိုးသေးသော အရှေ့တိုင်း နိုင်ငံများတွင် ခေါင်းချနိုင်ရန် ရည်သန်လျက် ရွှေ့ပြောင်းအခြေချ နေထိုင်လျက်ရှိကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့က သူတို့ ကျင်လည်ရာ လူ့ဘောင် အသိုင်းအဝိုင်းထဲက စိတ်ဓာတ် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို မခံစားနိုင်ကြ၊ မခံစားလိုကြတော့ချေ။
အခုပဲကြည့်။ နယ်မြို့လေးတစ်မြို့တွင်ဖြစ်စေ၊ ကျေးရွာလေးတစ်ခုတွင် ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းကျပျောက်ခဲ့သည်ဖြစ်ပါက အလွယ်တကူ ပြန်ရဖို့ ၉၅ % သေချာသော်လည်း မဟာရန်ကုန် ရွှေမြို့တော်ကြီးတွင် ကျပျောက်သွားပြီဖြစ်သောကြောင့် ပြန်မရဖို့ ရာနှုန်းပြည့် သေချာနေပါလေပြီ။
စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ စာရိတ္တဖွံ့ဖြိုးမှုကို ရုပ်ဝတ္ထု တိုးတက်မှုနှင့်အညီ ဆက်လက်တည်တံ့အောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်မှာ နည်းက တစ်နည်းတည်းသာ ရှိပါသည်။ ထိုနည်းကား လူအများ စာဖတ်လာအောင် အနည်းစုက ဝိုင်းဝန်း လှုံ့ဆော်ကြိုးပမ်းရမည့် နည်းသာဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာပြည် လူဦးရေက သန်း၅၀၊ အရောင်းရဆုံး စာနယ်ဇင်းစောင်ရေက သောင်းဂဏန်း၊ ရန်ကုန်လူဦးရေက အကြမ်းဖျဉ်း ငါးသန်း၊ ရန်ကုန် စာအုပ်အရောင်းက အရောင်းရဆုံးစာအုပ်မှ ထောင်ဂဏန်း။ ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကျွန်းက လူသုံးကုန်ပစ္စည်းရောင်းသော ဈေးပွဲတော်မှာ လူတွေ ကြိတ်ကြိတ်တိုး၊ ထိုနေရာမှ စာအုပ်ဈေးပွဲတော်ကား ချောက်တိချောက်ချက်။
ဈေးပွဲတော်တစ်ခုတွင် ကျွန်တော့်ထုတ်ဝေသူ ဇနီးသည်က ဆိုင်ဖွင့်ချင်လှသည်ဆိုသဖြင့် ကျွန်တော် သွားဖွင့်ဖူးသည်။ ဘေးဆိုင်က မိတ်ကပ်တွေ နှစ်သောင်းကျော်ဖိုး ဝယ်သည့် သားသည်မအေက ကျွန်တော့်ဆိုင်က ကျပ် ၅၀ဝ တန် ကလေးဖတ် စာအုပ်လေး လိုချင်သည့် သူ့သားငယ်ကို ငေါက်ငမ်းကာ ဆောင့်ဆွဲခေါ်သွားသည်ကို မျက်စိနှင့် တပ်အပ်မြင်ဖူးလိုက်ပါသည်။
(စာကြွင်း – ကျွန်တော့်သမီး ဖုန်းပျောက်သော ၂၀ဝ၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်နေ့မှာပင် တူမ ဆရာဝန်မလေး၏မိတ်ဆွေ ဆရာဝန်မလေး နှစ်ဦး၏ ပါလေရာဖုန်းနှစ်လုံးမှာလည်း အလားတူပင် ပျောက်သွားခဲ့ကာ ထိုဖုန်း နှစ်လုံးမှာလည်း လုံးဝ စုပ်စြုမပ်စပျောက်သွားခဲ့သည်ဟု ကြားသိလိုက်ရပြန်ပေရာ…)
(၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ဒုတိယပတ်တွင် ထုတ်ဝေသော Bi Weekly Eleven ဂျာနယ်ပါ ဆောင်းပါးကို ပြန်လည် တင်ဆက်လိုက်တာပါ။ ကနေ့ပဲ ကျွန်တော့် အိမ်ကို လာလည်တဲ့ ကျွန်တော့်သမီးအရွယ် ကလေးမလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ပါလေရာဖုန်းလည်း ပျောက်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော့်အိမ် အလာမှာ သူ စီးလာတဲ့ အငှားယာဉ်ပေါ်မှာ ကျကျန်ရစ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော့်သမီး ဖုန်းပျောက်တုန်းကအတိုင်း တစ်ထပ်တည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်ရစရာ လမ်းမမြင်တော့တာ သေချာသွားပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ကျော်က ရေးခဲ့ဖူးတာလေးကို ပြန်ရှာပြီး အမှတ်တရ ပြန်တင်လိုက်တာပါပဲခင်ဗျား။)
Author lettwebawPosted on 12 June 2011 13 June 2011 Categories Recounts, Reproduction, Thoughts
11 thoughts on “ချွတ်ခြုံ”
12 June 2011 at 11:23 pm
“ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရခြင်းဟုဆိုလျှင် ကြီးကျယ်လှရန်ကောဟု အဆွေစာဖတ်သူ တွေးကောင်း တွေးပါလိမ့်မည်။”
it’s not only Burmese people who would take others belongings,Sir. Coz I lost my Nexus Google Phone here in SG recently. I tried calling my ph, someone picked up at the other end then hung up! Finally they turn off the ph, so cant call them nemore.( now i miss my ph x( )
I think it means human tend to take free things and they feel happy taking them regardless of their Nationalities,Sir. =/
12 June 2011 at 11:53 pm
ဟုတ်ကဲ့ပါ ခင်ဗျာ… အဲဒါကို ကျွန်တော် အောက်ပါအတိုင်း ထည့်ရေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာချည်း မဟုတ်။ မကြာမတင်ကမှ ဖွံ့ဖြိုးစပြုလာသော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာလည်း ထို “ငတေစိတ်”တွေက ထွန်းကားတန်သလောက် ထွန်းကားလို့ နေပါသည်။ ရုပ်ဝတ္ထုများ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းနှင့် အချိုးညီစွာ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းမှာ ယိုယွင်းပျက်စီးလာသည်မှာ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် ပိုမိုသိသာလို့ နေသည်။ လို့ပါ။
ဆရာ Hanaro မျက်စိလျှမ်းသွားတယ် ထင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
25 November 2014 at 4:19 pm
ကိုကြီးကျော်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းနှစ်ရာလောက် (ဘာမှမကြာသေးဘူးနော်) တုန်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သူခိုးမရှိတဲ့နိုင်ငံလို့ ဂုရုကြီး ဦးဂိုအင်ကာဖြစ်လာမယ့်ကလေးလေးကို သူ့အဖိုးကုန်သည်ကြီး က ပြောခဲ့ဖူးတယ် လို့ မေတ္တာရှင်ဆရာတော်ရေးဖူးတာဖတ်ရတော့ ဂုဏ်ယူလိုက်တာဗျာ။ အဲဒီတုန်းက မြန်မာတွေဟာ ကိုယ်ရသင့်ရထိုက်တာမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းကို လုံးဝကိုယူချင်စိတ်မရှိတဲ့လူမျိူးဆိုပဲဗျာ။မကောင်းကျောင်းပို့ဆိုတဲ့ စကားလိုပဲ၊ အချောင်သမားစိတ်ဓာတ်တွေက နယ်ချဲ့တွေဆီက ကူးစက်ခံလိုက်ရတဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေများလားလို့ တွေးဆဆင်ခြင်မိရပါတယ်။
13 June 2011 at 2:48 am
13 June 2011 at 8:39 am
Sir, was your article published one year before your daughter lost her mobile?
13 June 2011 at 9:01 am
Very good point and thank you. I didn’t check the years, but copied the whole thing from my soft copy. Actually it happened in 2009. I will make some corrections. Thank you again.
13 June 2011 at 11:20 pm
မလေးရှားမှာ ကျွန်ခံတယ်….အဲ အလုပ်လုပ်ပါတယ်… Nokia N 97 ကိုင်ပါတယ်… အပြန်လမ်းမှာ ပျောက်တယ် ပြန်မရပါ။ မြို့တော် ကွာလာလမ်ပူတွင်ဖြစ်ပါသည်။ ဖုန်းသည် သည်နိုင်ငံ သည်နိုင်ငံသားများအတွက် မခက်ခဲသော်လည်း နည်းနည်း ကောင်းသော ဖုန်းများကို မည်သူမျှ ပြန်ပေးဟုသတင်းမရမိ။ ပျောက်သောသူ ပြန်ရသွားသည်ဟု ယနေ့တိုင်မကြားမိသေးပါ။ သည်ကြားထဲ လူလည်ခေါင်တွင် နှိုက်ထားတတ်သေးသည်၊လူပြတ်လျှင် သားကောင်၏ အခြေအနေကြည့်၍ လုတတ်သေးသည်။ စားသောက်ဆိုင်အချို့တွင် ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ဖြင့် ပြန်လာရောင်းသော သူခိုးဈေးကွက်သည်လည်း ပေါ်ပေါ်တင်တင် တည်ရှိ၏။
23 July 2011 at 9:48 pm
လောလောလတ်လတ် “မီး” သူငယ်တယောက် ရန်ကုန်ပြန်ရန် လေဆိပ်အသွား စပ်စလူးခါ၍ ဖုန်း taxi ပေါ်မှာကျန်ခဲ့ပါသည် … လေယာဉ်ထွက်မထွက် စပ်စပ်စုစု လျှာရှည်မိ၍ taxi driver ကအိမ်ထိလာပေးပါမည် but taxi ခ ပေးရမည်ဟုပြော၍ သဘောတူပြီးလာပို့ခိုင်းလိုက်ရာ … စလုံး က taxi driver တွေ သဘောကောင်းကြောင်းအထင်ကြီး၍ မှမဆုံး, ဖုန်းမှာ taxi ခ လောက်တောင် ဈေးမကြီးပါ … [ယောကျာင်္းစပ်စလူး က သူပြန်ရင် i phone ယူသွားမယ့်အကြောင်း ပြော၍ လျှာရှည်မိတာပါ 😦 ] … တကယ်ယူသွားပါသည် … ကံကောင်းတာက အဲဒီ i phone လေးက မြန်မာပြည်က taxi ပေါ်မှာ ကျန်ခဲ့ပါသည် အစရှာမရပါ … ကံမကောင်းရှာသော စပ်စလူးသူငယ်ချင်းမှာ သွက်သွက်ခါနေပါသည် …
24 July 2011 at 7:45 am
လူတွေရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တ နိမ့်ကျရတဲ့ အဓိက အကြောင်းကိုစဉ်းစားမိတော့ မြန်မာနိုင်ငံလူတော်တော်များများရဲ့ စိတ်ဓါတ်ဟာလဲ အခြားနိုင်ငံက လူတွေရဲ့စိတ်ဓါတ်ထက် မနိမ့်ကျပါဘူး.. ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံများမှာဖြင့် ပိုက်ဆံကို အတင်းအဓ္ဓမ လုယက်ရှာဖွေစရာမလိုတဲ့အပြင်.. ဒီလိုဖုန်းမျိုးရဲ့တန်ဖိုးဟာလဲ သူရို့ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့စာလိုက်ရင် မိုးနဲ့မြေလောက်မို့လို့.. ဘယ်နားကျပျောက်ပျောက် ပြန်ရဖို့က ၉၀ ရာနှုန်းရှိပါတယ်.. ပိုက်ဆံအိတ်ပျောက်ရင်လဲ ပါတဲ့ပိုက်ဆံက နည်းနည်းပဲရှိတာပါ.. ဘဏ်ကဒ်နဲ့ ခရက်ဒစ်ကဒ် ထဲကပိုက်ဆံက ကောက်ရတဲ့လူ ထုတ်လို့မှမရပဲလေ.. အဲလိုပဲ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေက အဟောင်းဆို ဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့အတွက် ဘယ်သူကမှ စိတ်မ၀င်စားကြပါဘူး.. လူကူးမီးပွိုင့် အနီကို ဖြတ်ကူးတာတောင် ကားပေါ်ကလူတွေက တလေးတစား ရပ်ပေးပါတယ်.. လူက လူ့အသံးအဆောင်ထက်တန်ဖိုးရှိတယ် … ရုပ်ဝတ္ထုထက် ကိုယ်ကျင့်တရားက တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကို နားလည်ကြပါတယ်.. နိုင်ငံချွတ်ခြုံကျလာရင် လူတွေရဲ့စိတ်ထားတွေလဲ ပြောင်းလာတတ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့ အဖိုးအဖွားခေတ်ကလူတွေရဲ့ ရိုးသားမှုမျိုး ခုခေတ်မယ်ရှားနေပါပြီ.. နောက်တစ်ချက်ကလဲ ကျောင်းတွေမှာ ပညာသင်ကြားတဲ့အခါ လူ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ စာရိတ္တကို အရေးပေးသင်တာမျိုး နည်းသွားတာကြောင့်ရယ်.. မိဘတွေရဲ့ သွန်သင်မှု အဆင့်ဆင့်လျော့နည်းလာတာကြောင့်ရယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဆရာ….
ကိုယ်စွမ်းနိုင်သလောက် တစ်နေ့မှာ လူကြီးတွေဖြစ်လာမယ့် ကိုယ့်သားသမီး တူမောင်ငယ် ကလေးတွေကို သွန်သင်ပေးဖို့ပဲ လိုမယ်ထင်ပါတယ်ဆရာရယ်..
Nay Myo Saw says:
14 August 2016 at 6:14 pm
ကျွန်တော့်အဖေကတော့ ဆိုင်မှာတင်ရောင်းတဲ့ဖုန်းတွေလှူတာ ဆယ်လုံးလောက်ရှိရောပေါ့
Next Next post: In Ever Loving Memory of Maung Thit Min